Kanaalka Soo-helitaanka ee ku jira Android-kaaga | Androidsis
UPDATE: Kuwa dhibaatooyinka ku qaba rakibaadda, iskuday inaad ka soo dejiso suuqgeyaha halkan oo ku rakib taleefanka. Codsigan waxaa suurtagal ah in lagu arko codsiyada suuqyada dalal kale. Markaad rakibto, waad fulisaa oo guji tabka dhexe, liiska kuu muuqda waxaad dooraneysaa T-Mobile na oo xir dalabka. Hada markii arjiga Suuqa Android waad raadin kartaa Discovery Channel waxayna u muuqan doontaa soo degsasho. Waxaan sidoo kale ku dhejiyaa nambarka QR.
DiscChannel kasta ayaa bilaabay codsi bilaash ah oo loogu talagalay Aaladaha AndroidCodsigan waxaad awoodi doontaa inaad ku hesho marin muhiim ah oo fiidiyowyo ah barnaamijyadooda sida Cazadores de Mitos. Marka lagu daro fiidiyowyada taxanaha ugu caansan ee Discovery, waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad gasho ururinta ballaadhan ee sawirrada, barnaamijyada, su'aalaha, fiidiyowyada Discovery News, iyo sidoo kale inaad baari karto kana iibsan karto filimada iyo alaabada kanaalka.
Iyada oo ay sii kordheyso caan ka mid ah Aaladaha Android"Waxaan ku faraxsanahay inaan u keenno daawadayaasha madal cusub oo xiiso leh oo u oggolaanaysa iyaga inay ku raaxaystaan ​​waxyaabo tayo sare leh isla markaana ay la kulmaan baahidooda isla markiiba," ayuu yidhi Todd Zandler, Madaxweyne Ku-Xigeenka Qaybta Warbaahinta ee Warbaahinta.
Waxaad halkan ku haysaa arjiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Channel Discovery oo ku saabsan Android-kaaga
La fulin karo dijo
Waxaan u maleynayaa inay tahay 2.0 sax? Sixirkeyga 1.6 ma rakibi karo 🙁
Ku jawaab AEjecutable
Riyadayda 1.6 Cyanogen 4.2.13 ma oggola in la rakibo sidoo kale.
Ma isku dayday inaad ka hoos dhigto suuqa? Waa inaad haysataa awood suuqa si aad u aragto. Waxaan uga tagay xiriiriye barnaamijkan iyo lambarka QR
Miyirkeyga 1.5 ... ma ii ogolaanayo inaan ku rakibo sidoo kale.
Jawaab Jose C
Weli ma aanan helin si aan uga shaqeeyo midkeyga nexus.